Ushiye kukhalwa uzamcolo | IOL Isolezwe
Ushiye kukhalwa uzamcolo
Isolezwe / 13 February 2013, 10:49am / NONTUTHUKO NGUBANE
ISIPHEPHO sangoMsombuluko sishiye kukhalwa eMsinga, kumuka izindlu kwaduka nabantu abayisithupha okubalwa nothisha wesikole sabakhubazekile kuleya ndawo. Isithombe: SITHUNYELWE
ILUNGU eliphezulu le-National Freedom Party (NFP) KwaZulu-Natal lilahlekelwe ngamalungu amane omndeni walo kuzamcolo ohlasele indawo yasoThukela, eMsinga, ngoMsombuluko ebusuku.
Kulesi sigameko izinkulungwane zabantu zisale dengwane kwaduka abayisithupha okukholakala ukuthi bashonile. Abomndeni kaNksz Sbongile Dlamini we-NFP baguguleke nendlu yakubo ngesikhathi kuhlasela lo zamcolo.
UNksz Dlamini uthe usinde ngoba ubengekho ekhaya eye emhlanganweni weqembu eThekwini.
Kulesi sibhicongo kuduke nothisha wesikole sabakhubazekile iKukhanyakoMsinga. Ukufunda kuphazamisekile kule ndawo kanti imigwaqo ivaliwe futhi kunokusabela ukuthi kungalimala abanye abantu.
Uthisha odukile kuthiwa kumuke yonke impahla yakhe yasendlini abeqashe kuyona. Izindlu eziningi kule ndawo zikhukhuleke ngesikhathi kungenisa umfula uThukela kulandela ukuna kwemvula enamandla ngoMsombuluko emini.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo uMnuz Sihle Mlotshwa uthe ngesikhathi uthishanhloko walesi sikole ezwa izindaba zokuduka kukathisha uqulekile wangeniswa esibhedlela.
“Ibhuloho u-R33 limuke lonke kanti uthisha omukile kusolwa ukuthi ubesemqashweni lapho kuhlala khona abanye othisha.”
Lesi sibhicongo sinyakazise isifundazwe njengoba izolo kuthunyelwe amathimba ezimo eziphuthumayo ukuba alekelele imiphakathi iningi layo elisale dengwane.
Ibalelwa ngaphezulu kwekhulu imizi ecekeleke phansi kwathi engu-30 yagugulwa amanzi.
Umgwaqo ohlanganisa leli dolobha laseMsinga neGreytown (uMngungundlovana) nawo kudingeke ukuba uvalwe ngenxa yokumuka kwebhuloho elihlanganisa lemigwaqo. Abezimo eziphuthumayo basebenze ubusuku nemini bevula imigwaqo emisha ukuze bafinyelele emindenini ekhahlamezekile.
Ithimba eliphezulu loNgqongqoshe ababhekelele izinhlekelele KwaZulu-Natal elihlanganisa uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu uNksz Nomusa Dube, owezeMpilo uDkt Sibongiseni Dlomo, OwezokuThuthukiswa koMphakathi uNkk Weziwe Thusi noweZamasiko, ubuCiko nezeMidlalo uNkk Ntombikayise Sibhidla-Saphetha lihambele le ndawo yesigameko ukuyohlola umonakalo nokwelekelela ngosizo oluphuthumayo. Bavakashele imindeni ekhahlanyezwe yizikhukhula nesalahlekelwe izihlobo zayo.
Ubalelwa ezigidini zamarandi umonakalo odalekile. Ekhuluma nemindeni ekhahlamezekile uNgqongqoshe uDube uthe, “Singuhulumeni sikhathazekile kakhulu ngomonakalo esiwubonayo lapha kule ndawo. Izikhukhula sezithanda ukuba yinsakavukela endaweni yasoThukela, eMsinga, ngoba nangonyaka odlule kwenzeka into efanayo. Njengohulumeni senza yonke imizamo ukuze silekelele imiphakathi esebunzimeni. Njengamanje kunezihlobo ezisadukile kanti sesibize amathimba amaphoyisa namasosha azohamba ethungatha izihlobo ezisadukile. Sinethemba lokuthi sizobathola besaphila bonke abantu abangakatholakali ngenxa yalo zamcolo.”
UNgqongoshe uzwakalise ukukhathazeka ngokuhamba kancane koMasipala kulendawo ekulandeleni imigomo eyabekwa yokuthi kufanele abantu abakhe eduze kwemisebe yemifula basuswe ngoba basengcupheni yokuba bamuke uma kwenzeka kuba nezimo ezifana nalezi.